Maqaalkan, waxaad ka heli doontaa liistada qaar ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ugu sarreysa ee Nigeria ee u furan inay ka helaan codsi bilaash ah dhammaan ardayda reer Nigeria ee laga yaabo inay ka heli lahaayeen ugu yaraan shahaadada bachelorka jaamacad la aqoonsan yahay oo reer Nigeria ah.
Raadinta daraasadaha qalin-jabinta ee Nigeria waxay noqon kartaa cabsi aan ogahay, laakiin miyaad ogtahay inay jiraan tiro wanaagsan oo fursado waxbarasho oo diblooma ah oo ka baxsan halkaas oo aad uga faa'iideysan karto sidii arday reer Nigeria ah
Maxaad waqti u lumineysaa markaad ka faa'iideysan karto aaladahaas gacmahaaga ku jira si aad u raadiso deeqdan waxbarasho oo aad u sahamiso.
Waxaa xiiso leh, qaar ka mid ah deeqaha waxbarasho waxay bixiyaan kafaala-qaadayaal si buuxda loo maal-galiyo ka-faa'iideystayaasha. Marka qaado waqtigaaga si aad ugu aqriso illaa dhammaadka dhammaan waxa ay ballanqaadayso inay bixiso.
Dhanka kale, eeg jadwalka mawduucyada halkan hoose si aad u aragto dulucda waxa aan ku hayno maqaalkan.
1 Yay yihiin kafaala qaadayaasha deeqdan waxbarasho ee jaamacadeed ee Nigeria?
2 Deeqaha Shahaadada Jaamacadeed ee Nigeria
2.1 Shahaadada Jaamacadeed ee Nigeria
2.2 Nigeria LNG Dibada Deeqaha Dibloomada Dibadeed ee Ardayda Nigerian
2.3 NITDA Deeqaha Shahaadada Sare ee Ardayda Nigerian
2.4 AGIP Deeqaha Shahaadada Sare ee Nigerian
2.5 Heinrich Boll Foundation Deeqaha Dibloomada ee Nigerian
2.6 Abaalmarinta BEA ee Nigerian
2.7 Deeqda waxbarasho ee SEOF ee loogu talagalay ardayda dhigata jaamacadda Nigerian
2.8 Deeqaha PTDF Postgraduate
2.9 Dowladda Federaalka ee Nigeria deeqda waxbarasho ee dibloomada
2.10 Barnaamijka Ardayda Shell SPDC
2.11 Barnaamijka Iskuxirka Warshadaha SAHARA Group Egbin
2.12 Jaamacadda Dundee Sanduuqa Horumarinta Teknolojiyada Batroolka (PTDF) deeqda waxbarasho
2.13 Barnaamijka Horumarinta Qalin-jabinta Caalamiga ah ee MTN ee ardayda qalin-jabisa
2.14 Barnaamijka Tababbarka Shirkadda Rainoil iyo Gaas ee loogu talagalay Qalinjabinta Nigerian
2.15 Dr. Murtala Muhammad Deeqo waxbarasho
Yay yihiin kafaala qaadayaasha deeqdan waxbarasho ee jaamacadeed ee Nigeria?
Kuwani deeqaha waxbarasho ee dibloomada ee Nigeria waxaa kafaala qaaday dhowr hay'adood. Qaar ka mid ahi waa wakaalado dawladeed halka qaarkoodna yihiin hay’ado aan dawli ahayn. Meelaha soo socdaa waxay ka caawiyaan ardayda reer Nigeria dalalka soo koraya inay sii wataan waxbarashadooda jaamacadeed.
Deeqaha Dowladda Federaalka ee ardayda reer Nigeria
Deeqda waxbarasho ee Dawlad Goboleedka ardayda Nigeria
Shirkadaha saliida deeqaha waxbarasho ee ardayda reer Nigeria
Kafaala qaadayaasha kale sida NGO-yada
Deeq waxbarasho oo dibloomo ah oo loogu talagalay ardayda ku nool Nigeria
Deeqaha Shahaadada Jaamacadeed ee Nigeria
Halkan maqaalkan, waxaad kuheli doontaa qaar kamid ah deeqaha waxbarasho ee sare ee Nigeria ee aad codsan karto iyo sida loo sameeyo. Runtii waqti ha ku qaadatid inaad wax ku akhrisatid.
Shahaadada Jaamacadeed ee Nigeria
NITDA Deeqaha Shahaadada Sare
Nigeria LNG Dibada Deeqaha Dibloomada Dibadeed ee Ardayda Nigerian
AGIP Deeqaha Shahaadada Sare ee Nigerian
Barnaamijka Tababarka Qalinjabinta ee Bangiga Stanbic IBTC
Heinrich Boll Foundation Deeqaha Dibloomada ee Nigerian
Abaalmarinta BEA ee Nigerian
Deeqda waxbarasho ee SEOF ee loogu talagalay ardayda dhigata jaamacadda Nigerian
Deeqaha PTDF Postgraduate
Dawladda Federaalka ee Deeqda Waxbarashada ee Nigeria
Barnaamijka Ardayda Shell SPDC
Barnaamijka Iskuxirka Warshadaha ee Sahara Group Egbin
Jaamacadda Dundee Sanduuqa Horumarinta Teknolojiyada Batroolka (PTDF) deeqda waxbarasho ee ardayda reer Nigeria
Barnaamijka Horumarinta Qalin-jabinta Caalamiga ah ee MTN ee ardayda qalin-jabisa
Barnaamijka Tababbarka Shirkadda Rainoil iyo Gaas ee loogu talagalay Qalinjabinta Nigerian
Sababaha qaar awgood, waxaa jira arday qalin jabisay oo leh u janjeera inay ka baxaan barnaamijyadooda jaamacadeed sababo ka baxsan awoodooda iyo mid ka mid ah sababahaas oo kale waxay noqon kartaa lacag la'aan si loo bixiyo biilasha qaarkood waana inay ka caawiso ardayda sidan oo kale ah deeqaha waxbarasho ee jaamacadeed Nigeria waa la aasaasay.
Marka, tan shahaadada sare ee deeqda waxbarasho ee Nigeria ayaa loo heli karaa codsadayaasha waqti-buuxa ah ee laga yaabo inay yihiin muwaadiniin reer Nigeria ah ama ku noolaan karaan Nigeria waqtiga barnaamijka.
Intaa waxaa dheer, barnaamijkani wuxuu hubiyaa inuu ka taageerayo ardayda inay sameeyaan shaqooyin guuleysta adduunka oo dhan.
Si aad ugu qalanto deeqdan waxbarasho ee gaarka ah, waa inaad heshay oggolaansho ku-meel-gaar ah oo loogu talagalay koorso jaamacadeed oo u-qalma oo laga helo Jaamacadda Stirling.
Waxay bixisaa £ 4,000 dhaafitaanka waxbarashada ee ardayda nasiibka u leh inay dib u dhigtaan.
Waxaad codsan kartaa halkan.
Tani waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan deeqaha waxbarasho ee Nigeria oo dhiirrigeliya heer sare ee tacliimeed waxayna taageertaa horumarka raasumaalka aadanaha ee dalka.
Haddii aad tahay qof wax ka bartay mid ka mid ah koorsooyinkan: Daraasaadka deegaanka, Injineernimada, Maareynta, Xisaabaadka, Dhaqaalaha, Cilmiga dhulka, iyo Caafimaadka.
Kadibna, waa inaad ka faa'iideysataa fursad kasta oo aad u baahan tahay inaad tan ku dalbato iyada oo loo maro xiriirka hoose.
NITDA Deeqaha Shahaadada Sare ee Ardayda Nigerian
NITDA deeqda waxbarasho ee dibloomada ee Nigeria waxay siisaa deeqo waxbarasho ardayda jaamacadeed si ay wax uga bartaan Jaamacadaha Nigeria. Waxaa lagu xambaaray mas'uuliyadda dib u habeynta hanuuninta IT-ga Nigeria isla markaana kor loogu qaadayaa heerkeeda heer caalami.
Si aad ugu qalanto deeqdan waxbarasho, waa inaad ku guuleysataa qaar ka mid ah imtixaannada kartida kadib taas oo laguugu dari doono.
Kaliya waa macallimiinta Jaamacadda iyo Polytechnic-ka ee leh MSc qayb kasta oo la xidhiidha Teknolojiyada Macluumaadka oo u qalma inay codsadaan deeqdan waxbarasho.
Mar labaad, kuwa haysta fasalka koowaad ama labaad ee Teknolojiyada Macluumaadka iyo Sharciga sidoo kale way dalban karaan inay aadaan barnaamijka sayidkooda.
Haddii aad xaq u leedahay oo aad xiiseyneyso, codso deeqdan waxbarasho iyada oo loo marayo xiriirka hoose.
Waxaad codsan kartaa halkan
Deeqdan waxbarasho waxaa kafaala qaadaya shirkadda Agip Exploration Limited waana mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ugu sarreysa ee hadda ka socda Nigeria. Iyada oo qayb ka ah Mas'uuliyaddeeda Bulsheed ee Shirkadeed (CSR), waxay u aragtaa diyaarinta iyo horumarinta shaqada.
Marka lagu heshiiyo tan, NAE waxay soo dhaweyneysaa codsiyada ka imanaya ardayda aqoonta u leh iyo xiisaha u leh Nigeria ee loogu talagalay Qorshaha Abaalmarinta Abaalmarinta Shahaadada Sare.
Deeqdan waxbarasho ee jaamacadeed waxaa la siiyaa dadka reer Nigeria ee ku raad jooga waxbarashadooda jaamacadeed jaamacadaha cilmiga la adeegsado ('Fachhochschulen'), ama Jaamacadaha farshaxanka ('Kunsthochschulen') ee Jarmalka.
Waa dalab sanadle ah sidaa darteedna, ka-faa'iideystayaasha waa inay ilaaliyaan diiwaanka tacliimeed ee wanaagsan, waa inay siyaasad ahaan iyo bulsho ahaanba soo jiitaan, ayna daneeyaan yoolalka aasaasiga ah ee aasaaska kuwaas oo ah: sinaan iyo is-hubin, deegaan iyo joogtayn, aqlabiyad nidaamka iyo xuquuqda aadanaha.
Dhagsii xiriirka hoose si aad u dalbato una istaag uqalma ka-faa'iideyste.
Abaalmarinta BEA waxay bixisaa deeqaha waxbarasho ee ugu dambeeya ee Nigeria ee loogu talagalay ardayda inay wax ku bartaan dibadda.
Miyaad weligaa jeclaan lahayd inaad sii wadato waxbarashadaada dibedda laakiin waxaad la kulantaa arrimo badan oo xaddidan?
Wasaaradda Waxbarashada ee Federaalka waxay u aragtay inay ku habboon tahay inay tixgeliso dadka reer Nigeria ee u qalma Heshiiska Waxbarashada Labada Dhinac si ay wax ugu baran karaan dibadda.
Tilmaamaha waxa ay tahay inaad lahaato waxay ku jiraan isku xirka hoose. Sidaa darteed, si naxariis leh u guji oo u akhri.
Waxaad ka heli kartaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxyaabaha ku saabsan Deeqda BEA halkan.
Sir Emeka Offor wuxuu arkaa baahida loo qabo waxbarashada iyo sababta uu ugu maalgashan karo. Wuxuu abaalmarin sanadle ah siiyaa dhalinyarada reer Nigeria ee aadka ugu baahan inay u sii socdaan barnaamijyadooda jaamacadeed.
In kasta oo deeqda waxbarasho ee SEOF aysan ku ekeyn oo keliya dib-u-qalin jabin, haddana waxaa jira dalabyo loogu talagalay ardayda jaamacadda dhigata.
Xiriiriyaha hoose wuxuu sii adeegi doonaa hage codsi.
Sida muuqata, tani waa mid ka mid ah deeqda waxbarasho ee ugu deeqsinimada badan Nigeria. Waxaa macquul ah inaad kujirto raadinta fursad barnaamijka mastarka, tani waxay noqon doontaa taam weyn.
Waa inaad martaa xiriirkan gaarka ah si aad u aragto haddii aad u-qalanto deeqda waxbarasho. Tani waa sababta oo ah degdegga loogu talagalay waa mid xad-dhaaf ah waxayna qaadataa mid ka mid ah inuu yeesho maqaam tacliimeed oo gaar ah in la tixgeliyo.
Waad dalban kartaa deeqda waxbarasho adigoo gujinaya xiriirka hoose.
Dowladda Federaalka ee Nigeria deeqda waxbarasho ee dibloomada
Dowladda Nigeria iyada oo loo marayo Wasaaradda Waxbarashada Federaalka iyo Guddiga Waxbarashada Federaalka waxay bixisaa deeqdan waxbarasho oo ah mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ugu sareysa ee Nigeria si ay uga caawiso ardayda inay aadaan barnaamijyada ay doorbidayaan shahaadada sare iyaga oo aan lahayn wax caqabad ah.
Si kastaba ha noqotee, deeqdan waxbarasho ee gaarka ah kuma koobna oo keliya heerka jaamacadeed. Waxay sidoo kale ku fidsan tahay heerarka NCE, HND, iyo heerarka shahaadada koowaad.
Deeqdan waxbarasho ee SHELL SPDC waa mid ka mid ah deeqda waxbarasho ee ugu sareysa ee Nigeria oo diiradda saareysa ardayda ku nool gobolka Niger Delta waxayna daryeeshaa daraasadaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah.
Taas ka sokow, shahaadada koowaad waxay noqon kartaa ka-faa'iideystayaal sidoo kale iyada oo SPDC ay bixiso qiyaastii 20 meeleyn tababar shaqo sanadle ah.
Barnaamijka Iskuxirka Warshadaha SAHARA Group Egbin
Shirkadda 'Egbin Power Plc' waxay u taagan tahay mid ka mid ah guulihii waaweynaa ee ay gaartay wershadaha tamarta ee Nigeria. Nuxurka barnaamijkan ayaa ah in lagu hormariyo dhaqdhaqaaqa 'Light up Nigeria' isla markaana loo koriyo gobollada kale ee ka hooseeya saxaaraha Afrika.
Si aad ugu qalanto barnaamijkan tababarka ee ardayda qalin jabisay, waa inaad:
Haysashada ugu yaraan Fasalka Labaad Qaybta Sare ama Deynta Sare waqtiga la codsanayo meelaynta.
Ku noqoshada waxbarashada wakhti buuxa markii aad dhammayso barnaamijka
Kaqalinjabiya maadooyinka soosocda: Injineernimada, Sayniska Sayniska Warshadaha, Maaliyadda, Macluumaadka & Teknolojiyada, iyo Amniga Deegaanka.
Waxaa kaliya loogu talagalay dadka reer Nigeria waxaana lagu martigelin doonaa Nigeria. Sidoo kale, kaqeybgalka barnaamijkan wuxuu ku siinayaa aqoon farsamo sida loo adeegsado waxa lagugu baray daraasadahaaga jaamacadeed.
Mar labaad, helitaanka hawlgelinta hal-hal ah oo lala yeelanayo xirfadlayaal kala duwan ayaa ku siinaysa gargaarka aad u baahan karto ee ku saabsan habkaaga edbinta. Barnaamijkani waa mid kooban wuxuuna qaadanayaa ilaa 3-6 si uu u dhameystiro.
Jaamacadda Dundee Sanduuqa Horumarinta Teknolojiyada Batroolka (PTDF) deeqda waxbarasho
Deeqdani waxay u egtahay ardayda reer Nigeria ee la fahmi karo ee doonaya inay u aadaan daraasaddooda jaamacadeed midkood heerka masters ama PhD.
Qeybaha uqalma barashada waxaa kamid ah Injineeriyada madaniga ah, injineernimada elektarooniga ah, tamarta batroolka iyo sharciga macdanta iyo siyaasada, joqraafiga / cilmiga deegaanka, injineernimada farsamada.
Waxay kaa caawineysaa inaad daryeesho ujrooyinka waxbarashada iyo qiimaha nolosha.
Si aad u aqriso waxbadan oo ku saabsan sida loogu qalmo loona codsado deeqdan waxbarasho ee sare, hubi xiriirka hoose.
Halkan guji si aad u hesho faahfaahinta deeqaha waxbarasho
Shabakada isgaarsiinta ee sida xawliga ah u koreysa waxay soo saartaa tiro dhalinyaro ah oo reer Nigeria ah oo qalin jabiya si ay u tababaraan iskuna qoraan iyagoo ka mid ah kooxdeeda
Marka, haddii aad ku qanacsan tahay xirfaddaada, da 'yarta ah una dhaxeysa da'da 22-26 sano, waa inaad ka mid noqotaa dhowr ka mid ah kuwa la soo xulay ee haysta darawalka ay MTN u baahan tahay.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in ay tahay inaad dhammaystirtay barnaamijka shahaadada bachelor-ka oo ay tahay inaad ku dalbato xiriiriyahan.
Qalinjabiyeyaasha reer Nigeria ee aqoonta u leh ee cabir ka dhigaya qeexitaanka Rainoil iyo Gas ee barnaamijkeeda tababarka qalin jabinta iyo joogitaanka tacliimeed ee wanaagsan waa inay maraan xiriirka hoose oo ay codsadaan.
Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sababta tan loogu soo daray liiska deeqaha waxbarasho ee ugufiican ardayda ka qalin jabisay Nigeria. Waa hagaag, tani waa sababta oo ah Rainoil waa mid ka mid ah shirkadaha sumcadda caanka ku ah saliidda ee Nigeria.
Dr. Murtala Muhammad Deeqo waxbarasho
Ma ogtahay in sanad walba hal arday oo reer Nigeria ah uu helo deeq waxbarasho oo heer jaamacadeed ah oo lagu maamuuso General Murtala Muhammed sharaftiisa?
Marka, deeqdan waxbarasho waxaa si buuxda u kafaala qaaday London Metropolitan University waxayna daboolaysaa kharashka waxbarashada ee barnaamijka Master ee machadka tacliinta sare.
Tani waxay si gaar ah ugu habboon tahay ardayda reer Nigeria ee doonaya inay wax ku bartaan UK.
Caqabadaha jira awgood, mid ayaa laga yaabaa inuusan sii wadin waxbarashadiisa ama waxbarashadeeda, gaar ahaan ka dib barnaamijka shahaadada bachelorka. Waxa laga yaabo inaadan ogeyn waa inay jiraan fursado deeq waxbarasho oo loogu talagalay ardayda dhigata shahaadada labaad ee Nigeria kuwaas oo daryeeli kara waxbarashadaada, hoygaaga iyo kharashyada waxbarashada oo dhameystiran.
In kasta oo qaar ka mid ah deeqaha waxbarasho ee jaamacadeed ee ku yaal Nigeria ee ku qoran qodobkan loogu talagalay barnaamijka sayidkiisa, tiro wanaagsan, si kastaba ha noqotee, waxaa loogu talagalay Ph.D. barnaamijyada.
Haddii aad u-qalanto shuruudaha, naftaada wax uun baa fiican oo aad isku codsan kartaa. Nasiib wacan!
MTN Foundation Shahaadada Jaamacadeed ee Nigerian
Deeqda Chevron ee Nigerian
Deeqda waxbarasho ee ExxonMobil ee ardayda dhigata shahaadada koowaad ee Nigerian
Agbami Scholarship ee ardayda Nigerian
Liiska Jaamacadaha Bilaashka ah ee Waxbarashada Kanada ee Ardayda Caalamiga ah
Koorsooyinka Bilaashka ah ee 'Stanford Online' oo wata Shahaadooyin
Wax kubarashada Kanada IELTS
Koorsooyinka Tooska ah ee Bilaashka ah ee Kanada
Deeqaha Nigerian Deeq waxbarasho oo diblooma ah
Deeqaha waxbarasho ee NigerianDeeqo waxbarasho oo loogu talagalay dadka reer Nigeria
Previous Post:13 Jaamacadaha Caafimaadka ee Australia Ardayda Caalamiga ah
Post Next:11 Deeqaha Caafimaadka ee ugu Fiican Kanada Ardayda Caalamiga ah
Pingback: Jaamacadda Abuja ayaa Koorsooyinkeeda leh Calaamadaha-goynta 2022-ka